सँगै हुँदा र नहुँदाको फरक धेरै हुन्छ – NepalayaNews.com
सँगै हुँदा र नहुँदाको फरक धेरै हुन्छ
१९ जेष्ठ २०७२, मंगलवार १६:२४
गोबर्धन पुजा अर्थात राजेन्द्र श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा नसुनेको नाम भने पक्कै होइन नेपाली साहित्यमा बिशेषत कबिता, गीत सगै पत्रकारितामा पनि कलम चलाएका पुजा हाल अमेरिकाको बोष्टनमा बस्दै आएका छन् दुई छोरा र श्रीमती कुशल श्रेष्ठ साथ बस्दै आएका छन् अमेरिकामा पनि अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज तथा सिर्जना उत्साब सगं सम्बन्धित रहेर नेपाली साहित्यको उत्धानमा लागी परेका छन् । उनै साहित्यकार तथा पत्रकार गोबर्धन पुजा सगं विष्णु प्रसाद पाैडेलले गरेको कुराकानीका अशंहरु
यो जोडीको भेट कसरी हुन पुग्यो ?
गोबर्धन ः हाम्रो विवाह २०६० सालमा भएको थियो । मागी विवाह हो । मेरो तथा उनको पनि साथी निलम कार्की ‘निहारिका’ हाम्रो विवाहको लमी हुन् । त्यो वेला म लुम्बिनी घुम्न जाने कार्यक्रम थियो । त्यही बेला निलमले त्यहाँ मेरो साथी छ एकचोटि हेरेर आउनू भन्ने कुरा भयो । त्यसपछि हुन्छ त नि भनेर ख्यालख्यालैमा गइयो निलमले उनको दाइलार्ई आउँदै छन् भनेर भनेका रैछन् अनि हाम्रो पहिलो भेट हुन पुगेको थियो ।
मेडमको रोजाइमा यस्तो केटा भइदिए हुने थियो भन्ने थियो कि के थियो ?
कुशल ः मेरोभन्दा पनि धेरैजसो केटीहरुको चाहना आफूले भन्दा पनि धेरै माया गर्ने, केयर गर्ने खालको केटा भइदिए हुने थियो भन्ने हुन्छ । मेरो चाहना पनि त्यस्तै थियो ।
सुरुमा तपाईंलाई गोवद्र्धनजीको के कुराले बढी आकर्षण गर्न पुग्यो ?
कुशल ः म सबैभन्दा पहिले उहाँको बोलीचालीबाट नै बढी आकर्षित हुन पुगेकी थिएँ ।
गोवद्र्धनजीलाई मेडमप्रति के कुराले सबैभन्दा आकर्षण गर्यो ?
गोबर्धन ःविषेष गरी म अलि बढी बोल्ने बानी रहेको कारणले गर्दा मैले के सोच्दै थिएँ भने मेरो हुनेवाला श्रीमती कम बोल्ने भइदिए हुने थियो भन्ने थियो । त्यसै सिलसिलामा यिनलाई हेर्ने जाँदा त्यो सबै गुणहरु यिनमा पाउन म सफल भएँ । उनको बोली लजालु थियो, त्यसमाथि अलि कम बोल्ने, सोचेर, विचार गरेर बोल्ने यिनको बानीले गर्दा म यिनीप्रति अलि बढी आकर्षित हुन पुगेको थिएँ ।
तपाईंहरुको विवाहमा घर परिवारको कस्तो सयोग रहन पुग्यो ?
गोबर्धन ः जव विवाहका लागि मैले यिनलाई हेरेर आएँ, त्यसपछि यतिको केटी हुन्छ भन्ने मलाई लागेपछि घर परिवारमा कुरा चलाएँ । त्यसपछाडि कुरा अगाडि बढ्यो । हाम्रो नेवार संस्कृति अनुसार बिहेको कुरा छिन्न सुपारी लैजाने चलन छ । त्यो सबै काम भयो । घरमा आमामात्र भएको र बुवा नभएको कारणले गर्दा त्यो सबै काम मेरो नै अग्रसरतामा नै भयो ।
मेडमलाई सुरुमा आफ्नो जन्म घर छोडेर कर्म घरमा आउँदा कस्तो महसुस हुन पुगेको थियो ?
कुशल ः सुरुमा त कसैलाई पनि नचिनेको, नदेखेको ठाउँको दाजुभाइको दिदीबहिनी नचिनेर एकदम मलाई अड लागेको थियो । तर विस्तारै विस्तारै सबै चिनजान हुँदै गएपछि भने सबै कुराहरु सहज हुँदै गयो ।
गोबर्धनजी साहित्यमा लागेको मान्छे धेरैजसो बाहिर कार्यक्रममा जानुहुन्थ्यो होला । त्यो बेला मेडमलाई कस्तो लाग्थ्यो ?
कुशल ः खासै मलाई त्यस्तो केही अप्ठेरो भएको महसुस भएन । किन कि म घर पविारसँग घुलमिल भइसकेकी थिएँ । साथै उहाँ खासै त्यति साह्रै बाहिर जानुहुन्नथ्यो ।
उहाँको साहित्यिक यात्राले गर्दा घर परिवारलाई समय नदिने भयो कि भएन ?
कुशल ः खासै त्यस्तो समस्या केही भएन । किन कि उहाँले साहित्य र घर परिवारलाई मिलाएर समय दिनुको साथै दुवैलाई सँगै अगाडि लिएर जानुभयो । हामीलाई परेको बेला उहाँले समय दिनुहुन्थ्यो । त्यसले गर्दा खासै समस्या भएन ।
उहाँ जागिरको सिलसिलामा बाहिर जाँदा बच्चाहरु भइसके पछाडि छोराहरुले बुवाले हामीहरुलाई समय नै दिनुभएन भनेर तपाईंलाई गुनासो गर्छन् कि गर्दैनन् ?
कुशल ः त्यस्तो गुनासो कहिले पनि गरेनन्, किन कि नेपालमा हँुदा हाम्रो ठूलो बाबुमात्र थियो । ऊ ३÷४ वर्षको हँुदा उहाँ यता अमेरिका आउनुभयो । सानु बाबु गर्भमा नै थियो । यता आइसके पछाडि मैलेभन्दा पनि उहाँले बढी समय दिनुहुन्थ्यो । बाहिर मैले भन्दा नि उहाँले बढी घुमाउनुहुन्थ्यो । हप्ताको एक दिन उहाँको विदा हुन्थ्यो । त्यो बेला हामीहरु प्राय बाहिर नै घुम्न जान्थ्यांै ।
पहिले करिब डेढ वर्ष जति तपार्इं यता अमेरिकामा मेडम, छोराहरु उता नेपालमा त्यो बेला तपार्इंलाई कस्तो अनुभव भएको थियो ?
गोबर्धन ःत्यो बेलाको समय मेरो लागि साह्रै पीडादायी थियो, किन कि मैले उनलाई नेपालमा छाड्दा उनको गर्भमा द्रोस्रो छोरा ८ महिनाको थियो त्यो बेला मैले उनलाई निकै मिस गरेको थिएँ । त्यस्तो बेलामा मैले उनलाई साथ दिन नसकेकोमा मलाई जीवनमा असजिलो महसुस भएको थियो । तर मेरो चाँडै ९० दिनमा ग्रिनकार्ड बन्यो र करिब एक डेढ वर्ष बीचमा म दुईचोटि नेपाल गएँ । त्यसपछि सबैको ग्रिनकार्ड भयो ।
त्यो बेला मेडमलाई कस्तो महसुस भएको थियो ?
कुशल ः त्यति बेला उहाँ तिन महिनाका लागि भनेर अमेरिका आउनुभएको थियो तर मेरो डेलिभरी हुने वेलामा त म यतै वस्ने भए यतै एप्लाई गर्ने भए भन्नुभयो त्यो बेला मलाई निकै नरमाइलो लाग्यो बाबु जन्मेपछाडि पनि मैले उहाँलाई निकै मिस गरें । किन कि पहिलेको बाबु जन्मे पछाडि उहाँले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, उस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेर एकदम सम्झना आइरहन्थ्यो । त्यो बेला मलाई सँगै हँुदा र नहुँदाको फरक थाहा भयो ।
गोबर्धनजीको सबैभन्दा राम्रो बानी के छ ?
कुशल ः उहाँ विषेष गरी सबै मानिससँग चाँडै घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ । नचिनेको मान्छेलाई पनि चाँडै नै आफ्नो साथी बनाउन सक्ने उहाँको बानी मलाई एकदम मन पर्छ ।
नराम्रो पक्ष नि ?
कुशल ः त्यस्तो त खासै उहाँको नराम्रो बानी केही छैन, तर उहाँ अरुलाई छिट्टै विश्वास गर्नुहुन्छ । त्यो बानी सुधार गरेदेखि राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ ।
गोवद्र्धनजीले पहिरनमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ ?
कुशल ः उहाँ खासै पहिरनमा ध्यान दिनुहुन्न बरु बेलाबेलामा मनै उहाँलाई कराइराख्छु । सामान्य त उहाँ सट, पाइन्ट नै लगाउनुहुन्छ । तर कहीं कतै कार्यक्रममा जाँदा भने पहिरनमा अलि बढी ध्यान दिनुहुन्छ ।
गोबर्धन जीले कुन पहिरन लगाउँदा तपार्इंलाई राम्रो लाग्छ ?
कुशल ः उहाँले ब्लु कलरको सट लगाएको मन पर्छ ।
खानामा कस्तो खाना खान वढी रुचाउनुहुन्छ ?
कुशल ः उहाँ सबैभन्दा बढी मन पर्ने भनेको ढिँडोे छ ।
कुशल ः अलि अलि सघाउनुहुन्छ ।
गोवद्र्धनजीलाई मेडमको के कुरा सबैभन्दा बढी मन पर्छ ?
कुशल ः उनको सबैभन्दा मलाई मन पर्ने बानी भनेको उनको सोझोपन छ । घरमा आउने पाहुनाहरुलाई मैले भन्दा पनि उनले बढी सम्मान गर्ने उनको बानी मलाई मन पर्छ ।
तपाईंको विचारमा मेडले सुधार गर्नुपर्र्नेे वानी के रहेको छ ?
गोबर्धन ः उनमा अलि बढी सोझोपना छ । त्यसमा अलि सुधार गरेदेखि राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ । किन कि उनी चाहिनेभन्दा पनि अलि बढी सोझी छन् । उनी अरुलाई पीडा दिन नै नचाहने उनको स्वभाव छ । बरु आफू नै पीडा लिएर बस्ने उनको बानी छ ।
पहिरनमा मेडमले के लगाएको तपाईंलाई मन पर्छ ?
गोबर्धन ः सामान्या कुनै पाटी, सभा, समारोहमा जाँदा सारी नै लगाएको राम्रो लाग्छ तर, सामान्य जीवनमा सट, पाइन्ट पनि राम्रै लाग्छ ।
तपाईंलाई मेडमले पकाएको सबैभन्दा मन पर्ने परिकार के छ ?
गोबर्धन ः सामान्य त हामीले दालभात, तरकारी नै खान्छौं तर, उनले बनाएको अचार भने मलाई सारै मिठो लाग्छ ।
किचनमा उहाँलाई कतिको समय दिनु हुन्छ ?
गोबर्धन ः पहिले नेपालमा हुदा मैले किचनमा उनलाई निकै समय दिने गरेको थिएँ । तर यता आएपछि त्यति धेरै समय दिन त सकेको छैन तर, पनि बिहान उनले बेलुका मैले नै पकाउँछु । उनले बिहान धेरै पकाएर जाने गरेकाले मलाई बेलुका धेरै पकाउनुपरेको छैन ।
तपार्इंले सिर्जना गरेका कृतिहरु सुरुमा मेडमलाई सुनाउनु हुन्छ होला ? त्यो बेला मेडमको तर्फबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ?
गोबर्धन ः मैले नेपालमा हुँदा लेखे पछाडि सुरुमा उनलाई नै सुनाउने गर्थें । त्यसमा उनले पढेपछि राम्रो छ भनेर भनिन् भने छि मैले पढ्ने गर्थें । तर यता आएपछि मेरो लेखन अलि कम भएको छ । यसमा उनले नै चासो राख्ने गरेकी छन् । साहित्यमा मलाईभन्दा बढी उनलाई बढी रुचि छ कि जस्तो लाग्छ । मैलेभन्दा बढी साहित्यिक कृतिहरु उनले नै धेरै पढ्छिन् ।
गोबर्धनजी साहित्यमा लाग्नुभएको छ । मेडमलाई कत्तिको मन पर्छ ?
कुशल ः त्यस्तो मन नपर्ने त खासै कारण छैन् । उहाँ साहित्यमा लागेको मलाई राम्रै लागिराछ ।
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २२:४०
एप्पलले हरेक ३/ ४ हप्तामा किन्यो एउटा कम्पनी १९ जेष्ठ २०७२, मंगलवार १६:२४
अमेरिकी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्न बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर १९ जेष्ठ २०७२, मंगलवार १६:२४
स्व. आङ् पासाङ् लामाको परिवारबाट शेर्पा किदुग अमेरिकालाई पचास हजार डलर सहयोग १९ जेष्ठ २०७२, मंगलवार १६:२४